Tag: zvemagariro ecommerce | Martech Zone
Tag: zvemagariro ecommerce
Chinhu chimwe chete kushambadza kuburikidza nesocial media uye kudzosa vanhu kune yako saiti, asi magariro enhau mapuratifomu ari kutsvaga kuunza shanduko padhuze nekudzora ivo nekuenderera nekuvaunza zvakananga mumapuratifomu avo. Kune e-commerce vanopa, ichi chiitiko chinogamuchirwa nekuti zvave zvakaoma kuyera nekuona mhinduro yakanaka kwazvo pasocial media media yavo nekutendeuka. Kuchengeta uye kupihwa kunoramba kuri kunetsa. Ehezve, kune vezvenhau
Pandaive ku IRCE, ndaifara chaizvo apo mumwe mutauri, Danny Gavin, paakandimisa ndokundiudza kuti akange andiona ndichitaura makore apfuura pachiitiko kuAustin. Danny ndomumwe wevatengesi vepamhepo veInternet… kusimudzira kushambadzira kwepamhepo kweInternet uye nhepfenyuro yemagariro enhau yaBrian Gavin Diamonds. Nehunyanzvi hwake, akabatsirwa kusimudzira BGD kumatanho eInternet Retailer eTop 1000 uye 50 Inokurumidza Kukura E-Commerce Makambani. Tichadaro
Vazhinji vanhu vanopa zvidzikisira uye zvinopihwa kuti vawane vatengi vatsva. Izvi zvakapusa kana iwe uchifunga nezvazvo, zvakadii nekupa mubayiro vatengi vari kutoshandisa mari? Muchokwadi, ko zvakadii nekupa mubayiro vatengi vanogovana izvo chokwadi chavakatenga kubva kwauri nemasocial network avo? Parizvino uchitsvaga pamusoro peanopfuura makumi matatu muzana chiyero chekushandurwa, Zvemagariro Rebate ipuratifomu yakajeka. Kwete chete kuti uri kushandisa izwi remuromo kushambadzira, iwe uri zvakare kupa inokurudzira